Makatsi - Noti Katsi | Noti Katsi (Peji 4)
Ndeupi mutsauko pakudyisa katsi nembwa?
Ndeupi mutsauko pakudyisa katsi nembwa? Kana iwe uchida kuziva kuti nei usingakwanise kupa imbwa chikafu kumakati, pinda uye isu tichapindura mubvunzo wako.
Ndakagadzirira kuva nekatsi here?
Ndakagadzirira kuva nekatsi here? Kana iwe uri kufunga kugara nemumwe, pinda mukati uye isu tichakuudza zvese zvaunoda kuti ufare.
Katsi yangu ingagare mazuva mangani kumba?
Katsi yangu ingagare mazuva mangani kumba? Kana iwe uchifanira kuenda parwendo, pinda uye isu tinokuudza iwe kuti yakareba sei furry yako inogona kusiiwa yega.
Nei katsi dzisinganzwisise iyo inotapira kuravira
Nei katsi dzisinganzwisise iyo inotapira kuravira? Kana iwe uchida kuziva zvakare kuti ndeapi mavhenekero avanoona, usazeze, pinda uye isu tichakuudza.
Zvinhu zvekuisa mupfungwa usati warara nekatsi yako
Kana iwe ukaronga kurara husiku pamwe nemukaka, pinda uye isu tinokuudza iwe zvinhu zvekufunga usati warara nekati yako iwe unofanirwa kuziva.
Dumbu rakazvimba mumakati
Katsi yako ine chirwere chakazvimba here? Tsvaga zviratidzo zvinokonzeresa kuputika mudumbu rekati, zvinogona kuda kutarisirwa nemhuka. Kana chipfuwo chako chine dumbu rakazvimba, pinda mukati uone kuti chii chakanganisika.
Maitiro ekuti kati iwedzere kuzvidzora kwayo
Nzira yekuita kuti kati iwedzere kuzvidzora kwayo? Kana shamwari yako isiri kuenda panguva yake yakanakisa, pinda uye isu tichakubatsira iwe kumubatsira.
Mboro yangu yaiswa muchetura, ndoita sei?
Ziva nhanho dzinotevera kana waiswa chepfu uye matipi ekudzivirira mamiriro aya anogona kukonzera rufu kumhuka. Chii chiripo chekuita?
Nzira yekushamwaridzana sei mukuru katsi?
Nzira yekushamwaridzana sei mukuru katsi? Kana iwe wakagamuchira mumwe munhu anotya kana anotya, pinda iwe uye isu tichakubatsira iwe kumubatsira.
Chii chandingape katsi
Zuva rekuzvarwa kwekatsi yako riri kuuya uye iwe unoda kumupa chipo chakakosha? Kana iwe uri kushamisika kuti chii chandingape katsi, pinda. :)
Sei katsi dzichidedera
Katsi yangu inodedera? Kudedera kunotyisa, asi kuona chakakonzera kuti nei katsi dzichidedera kwakakosha kukubatsira. Tsvaga rondedzero yezvinowanzoitika zvikonzero uye mhinduro dzekudengenyeka mumakati.
Zvido zvekatsi yeAndes
Katsi yeAndes inyoka yemusango yenzvimbo dzemakomo eSouth America. Imhuka yakanaka kwazvo iyo, zvinosuwisa, iri munjodzi yakakomba yekutsakatika. Pinda ugozviziva.
Nzira yekutyisidzira kure katsi yakarasika
Nzira yekutyisidzira sei katsi yakarasika pasina kuikuvadza? Kana iwe uine feline roja uye iwe ungade kuti varege kukushanyira, pinda.
Sei katsi yangu ichihonora?
Sei katsi yangu ichihonora? Kana shamwari yako yatanga kuridza ngonono uye yainge isati yambozviita, pinda tinokuudza zvikonzero zvinoita kuti ahonye.
Maitiro ekudzivirira katsi yemusango
Nzira yekupima katsi yemusango? Kana ukasangana nehasha dzaunofungidzira kuti dzakasiiwa, pinda tinokuudza zvekuita kuti umubatsire.
Samson, kati hombe muNew York
Sangana naSamson, katsi hombe muNew York. Maine Coon iyo isingaremerwi zvakare uye isingasviki gumi nematanhatu kilos uye inoyera 13 metres. Kupinda.
Nzira yekudzivirira muti weKisimusi kubva kumakati
Nzira yekudzivirira sei muti weKisimusi kubva kumakati? Kana iwe uchida kunakirwa nemuti uye ugare nemhara, huya upinde tinokubatsira.
Maitiro ekuchengetedza katsi kubuda munjodzi
Nzira yekuchengetedza sei kati kubva panjodzi? Kana iwe uchigara neine furry uye iwe uchida kuti agare akachengeteka chaizvo uye achifara newe, usazeze kupinda.
Kwakadii chiratidzo chehusiku chemakati?
Wati wambofunga here kuti katsi husiku chiratidzo chinoratidzika sei? Kana zvirizvo, pindai titsanangure kuti vanouya sei manheru.
Ndinofudza kangani katsi pazuva
Ndinofudza katsi kangani pazuva? Kana iwe uine kusahadzika, isu tinozvigadzirisa zvese. Pinda uye uone kuti furry yako inofanirwa kudya zvakadii.
Siberia katsi paradhiso iripo, uye iri muRussia
Kana iwe uchida katsi dzeSiberia, zvirokwazvo iwe unorota kuti pane nzvimbo kwavanogona kuve zvakanaka, handiti? Zvakanaka, purazi riripo. Uye iri muRussia. ;)
Chii chandingaite kuti kati yangu indide?
Chii chandingaite kuti kati yangu indide? Kana uchangobva kumugamuchira, pinda tinokuudza zvese zvaunofanirwa kuita kuti uwane hukama hwake.
Zvese nezvekubatana kwekuchengetwa kwezvipfuyo
Wakangoparadzaniswa here usingazive kuti kati ichagara naani? Pinda uye isu tese tichakuudza nezve kubatana kwekuchengetwa kwemhuka.
Kuchengeta sei katsi yaAshera?
Isu tinokuudza maitiro ekuchengeta Ashera katsi, yakasarudzika yakasanganiswa iyo isingazosiyi chero munhu asina hanya, nekuti ine rudo uye inoteerera. ;)
Kuita sei mukutarisana nekurohwa nekatsi?
Isu tinotsanangura maitiro ekuita mukutarisana nekurohwa nekatsi. Tsvaga zvaunofanira kuita kana furry yako yanga iri nyajambwa wetsaona.
Sei katsi yangu ichidya huswa
Uri kushamisika kuti sei katsi yangu ichidya huswa? Kana zvirizvo, pinda tinokuudza kuti sei aine hunhu hwakadai.
Kubatsira Vana Vako Kutsungirira Kurasikirwa kweKati
Nzira yekubatsira vana kukurira kurasikirwa kwekati? Kushungurudzika inguva yakaoma kwazvo kune chero munhu, asi kuvana inogona kunyanya kudaro. Kupinda.
Nei katsi yangu ichidzikira uremu?
Uri kunetseka nezve furry yako here? Kana iwe uchinetseka kuti nei kati yangu iri kurasikirwa uremu uye usingakwanise kuziva chikonzero, pinda uye isu tichakubatsira kuti uzviwane.
Maitiro ekuendesa katsi yangu kun'anga
Kana iwe uchinetseka kuti ungaendesa sei kati yangu kun'anga, pinda uye isu tichakupa akawanda matipi kuti iwe ugone kuitora zvakachengeteka uye zvakadzikama.
Nzira yekudzikamisa kati?
Isu tinokuudza maitiro ekudzikamisa kati kana iine nguva yakaipa. Kana shamwari yako ikavhunduka zvakanyanya pane mamwe mazuva egore, pinda uye tinokuudza kuti ungamubatsira sei.
Nzira yekudzidzisa katsi yakakura
Kana iwe wakagamuchira imbwa ine hura iyo yakasiya hudiki hwayo kumashure, pinda uye iwe uchaona maitiro ekudzidzisa katsi yevakuru kuti ifare.
Mboro yangu yatsemuka
Chii chaunofanira kuita kana katsi yako ine gumbo rakatyoka kana akaremara? Nhema dzekare yekuti katsi dzese dzinomhara pamakumbo avo hazviwanzo kuitika, saka zvinogona kuitika kuti feline yako inopwanya paw
Simon's Cat, inonakidza inoteedzana mifananidzo
Unoziva iyo yaSimon's Cat nhevedzano? Pinda utarise mamwe emavhidhiyo anonakidza sezvaunotora mukana uye uchienzanisa nekatsi yako. ;)
Mishonga yekumba ye dandruff mumakati
Huru yako ine mavara machena evhudzi rake here? Pinda uye isu tinokuudza iwe unoshanda kwazvo mishonga yekumba ye dandruff mumakati.
Chii chinonzi immune katsi?
Unoziva here kuti chii chinodzivirira katsi? Tinokubatsira kuti uzviwane uye, mukuwedzera, tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve feline AIDS chirwere.
Ungawana sei katsi kumba?
Wakatosvika kumba kwako uye furry yako haioneke? Pinda tikutaurire kuti ungawana sei katsi kumba. Ichokwadi haisi kuenda kure. ;)
Inoshamwaridzana kati inobereka
Isu tinokuudza kuti ndeapi makati anofambidzana eati kunze uko. Tsvaga kuti ndeapi akanyanya kudakadza furry uye zvaunofanirwa kuita kuti wako furry one.
Zvekuita zuva rekutanga nekatsi
Chii chekuita zuva rekutanga nekatsi? Kana iwe uchangotora imwe uye iwe usingazive zvekuita, usazeze: pinda uye isu tichakubatsira iwe.
Ungasarudza sei yakanaka feed ye kittens
Isu tinokubatsira iwe kuziva kuti ungasarudza sei yakanaka furu yekiti. Pinda uone izvo zvaunofanira kupfeka kuti vakure vaine hutano uye vakasimba.
Isu tinokutaurira hunhu hwese hwemakati, nhoroondo yavo uye mavambo pamwe nezvimwe zvinokatyamadza zvevapamba vekumba vatinoda zvakanyanya.
Kangani kandinofanira kutora katsi yangu kunovhenekwa nemhuka?
Iwe ungade here kuziva kuti kangani ini ndichifanirwa kuenda nekati yangu kunovhenekwa nezvechiremba? Kana zvirizvo, pinda uone.
Maitiro ekuhwina kuvimba kwechati yemugwagwa
Isu tinokuudza zvaunofanira kuziva nezvekuti ungawana sei kuvimba kwekatsi dzemugwagwa Pinda uone kuti ungaita sei shamwari kwavari.
Dambudziko rekugaya mumakati
Iwe unofungidzira kuti furry yako haina kunyatsoita? Pinda uye isu tinokuudza kuti ndeapi matambudziko ekugaya mumakati uye zvekuita kuti vapore.
Matipi ekurarama nekatsi ine hukasha
Shamwari yako iri kuita zvisirizvo here? Pinda uye isu tinokupa iwe matipi mazhinji ekugara nekatsi ine hasha. Onawo kuti ungamubatsira sei.
Kudya kwevakafuta katsi
Isu tinokuudza iwe kuti kudya kwekitsi dzakafutisa kunofanirwa kunge kuri sei. Uye zvakare, isu tinokupa iwe akawanda matipi ekukubatsira iwe kuti udzorezve yako chaiyo huremu.
Inogona kuva katsi yemuriwo here?
Wakambozvibvunza here kuti inogona kunge iri katsi yemuriwo? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye tinokuudza kuti ndechipi chikafu chaunogona kuchipa.
Yakarasika katsi mapikicha
Isu tinokuratidza akateedzana mafoto ekitsi dzakarasika kuti uzive mararamiro avo mumugwagwa. Uye zvakare, isu tinokuudza zvaunogona kuita kuvabatsira.
Nziyo dzakanakisisa nezve katsi
Ungade here kunzwa dzimwe nziyo nezve katsi? Usazeze: pinda uye iwe unozowana zvimwe zveakanakisa akafuridzirwa nemhuka idzi.
Nzira yekupa kati kunwa
Shamwari yako hainwi mvura yakakwana here? Kana iyo furry ikamedza isingasviki 50-100 milliliters pakirogiramu yega yega yehuremu, huya mukati tikutaurire kuti unopa sei kati kunwa.
Sei katsi dzichisarudza munhu
Wakambozvibvunza here kuti nei katsi dzichisarudza munhu? Pinda uye iwe uchawana mhinduro kumubvunzo unonakidza wakadai.
Nzira yekutarisira katsi yevechidiki?
Haisi chokwadi chekutarisira katsi yevechidiki? Kana shamwari yako iine mwedzi mitanhatu kana kupfuura, usazeze kupinda kuti uwane nzira yekumudzidzisa nayo
Ndinoziva sei kuti katsi yangu murume kana mukadzi?
Ndinoziva sei kuti katsi yangu murume kana mukadzi? Dzimwe nguva hazvisi nyore kuti uzive, asi tinovimba tinogona kukubatsira kuti uzive. Kupinda.
Chii chinonzi kuneta mumakati uye inorapwa sei?
Shamwari dzako dzine hukasha dziri kurasikirwa here nezvavaimbofarira? Pinda uye isu tichakuudza izvo zvakashata mukitsi, uye zvaunogona kuita kuvabatsira.
Nzira yekuvaraidza sei katsi inoshungurudza
Iwe unoona here kuti furry rako harina kuita senge kare? Tsvaga maitiro ekuvaraidza katsi inofinha uye iye achazove akafanana zvakare.
Zvekuita mune nyaya yekushungurudzwa kwemhuka
Isu tinokuudza zvaunofanira kuita mune imwe nyaya yekushungurudzwa kwemhuka. Tsvaga kuti chii chinonzi imhosva kumhuka kuSpain, uye nemamiriro ezvinhu munyika.
Ko katsi dzinodanana kupfuura katsi here?
Ungade here kuziva kuti katsi dzinodanana kupfuura katsi? Usazeze kupinda kuti upindure mibvunzo yako uye sarudza kuti sarudza imwe kana imwe.
Kune ngozi here kutsvoda kati?
Wakaudzwa here kuti zvine njodzi kutsvoda kati? Kana zvirizvo, pinda uye tinokuudza kuti ichokwadi sei uye nei kumutsvoda iri zano rakanaka.
Katsi Inoratidza Sei Kuda
Isu tinokuudza iwe kuti katsi dzinoratidzira sei rudo, katsi dzine furry dzinogona kazhinji kuve dzakanyanya, dzisinganyatsooneka, asi zvakare dzine rudo kwazvo Kupinda.
Mitemo yekugara inopfuura imwechete katsi
Uri kufunga nezvekugara neanopfuura rimwe furry? Cherekedza iyi mitemo yekugara inopfuura imwechete katsi kuitira kuti ruzivo rwacho ruve rwakanaka.
Maitiro ekudzivirira kunyunyuta kwevavakidzani nekati netsi
Nzira yekudzivirira zvichemo zvevavakidzani nezvekunetsa kwekatsi? Kana furry yako ikaenda kunze uye iwe uchinetseka pamusoro pezvingataurwa nevavakidzani vako, usazeze kupinda.
Rubatsiro rwekutanga kumakati
Isu tinokuudza iwe izvo zvinofanirwa kuve mune yega yega yekutanga kit kit kit. Kudzivirira tsaona kubva kukubata iwe usina chinhu.
Ndeipi nguva yekudzivirira yekatsi?
Uri kuronga kurera katsi yako? Kana zvirizvo, pinda uone kuti inguvai yekubata kwekatsi uye kuti ungaziva sei kuti une nhumbu.
Kugamuchirwa kwekati yakachena
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvekugamuchira katsi dzakachena: izvo zvinodiwa kune vanogamuchira, kwaunogona kuzvitora, uye nezvimwe.
Sei isiri zano rakanaka kupa katsi?
Uri kufunga kupa katsi sechipo here? Kana zvirizvo, kutanga kwezvose, pinda uye iwe uchaona kuti nei isiri zano rakanaka kupa kitsi.
Nei katsi dzichizvishongedza?
Isu tinotsanangura kuti sei katsi dzinozvishongedza zvakanyanya. Idzi mhuka dzinoita sedzine kusimba kwakasimba kwazvo noutsanana hwavo, asi nei? Tsvaga.
Chii chandinoita kana ndikawana kitten nherera?
Wakawana here katsi nherera uye iwe hauzive zvekuita nadzo? Usanetseke. Tichazvitsanangura kwauri. Kupinda.
Sarudzo yemifananidzo yemakati iwe yauchada
Iwe unoda kuva nenguva inonakidza kwazvo here? Isu tinokurudzira kuti uone iwo akanakisa mafoto ekitsi atakakusarudzira iwe. Pinda unakirwe.
Nzira yekudzidzisa mwana mucheche
Nzira yekudzidzisa mwana mucheche? Kana iwe uchigara nemumwe, tevera kuraira kwedu kuti vadzidze, neruremekedzo uye nemoyo murefu, kurarama semhuri.
Sei kusarudza katsi yangu
Isu tinokuudza kuti ungasarudza sei katsi yangu, kuti ugone kuwana shamwari yako chaiyo uye ugovane makore angangoita makumi maviri ehupenyu hwako nenzira inoshamisa.
Ungasarudza sei katsi marara bhokisi?
Ungasarudza sei yakakodzera marara bhokisi kune katsi? Kana uchangotora imwe, usazeze kuteedzera kuraira kwedu kusarudza yakanyanya kukodzera tireyi.
Zvekuita kana katsi yangu ichishandisa nguva yakawanda iri yoga
Uri kushamisika kuti chii kana katsi yangu ikapedza nguva yakawanda iri yoga? Tsvaga maitiro ekuchengeta iye achivaraidzwa iwe usipo.
Chii chinonzi microchip ye?
Uri kunetseka here kuti katsi yako icharasika? Usazeze: enda naye kuna vet kuti aite microchipped. Pinda uye uwane kuti chii uye chii chaicho.
Ndezvipi zvirwere zvemukanwa mumakati?
Isu tinokuudza zvavari uye kuti zvirwere zvemumuromo zvinodzivirirwa sei mumakati kuitira kuti furry yako inakirwe nechikafu chake zuva nezuva.
Matipi ekuvandudza hutsanana
Tinokupa iwe matipi mazhinji ekuvandudza hutsanana hwekatsi. Muite kuti anzwe akasununguka kugara newe.
Sei katsi yangu isingandide
Sei katsi yangu isingandide? Tsvaga kuti sei imbwa yako yarega kukuda uye zvaunogona kuita kuti uwanezve rudo rwake.
Katsi yako inofungei nezvako
Wati wambofunga here kuti kati yako inofungei nezvako? Kana iwe uchida kuziva zviri kuitika mumusoro wake, usazeze kupinda.
Nei mboro yangu ichihotsira zvakadai
Iwe unofungidzira kuti furry yako haina kunyatsoita? Kana iwe urikushamisika kuti sei katsi yangu ichihotsira zvakanyanya, pinda uye tinokuudza izvo zvinogona kukonzeresa
Sei katsi dzichitamba nemiswe yadzo
Wati wamboshamisika here kuti nei katsi dzichitamba nemiswe yadzo? Kana zvirizvo, pinda uye tinokuudzawo zvekuita kuzvidzivirira.
Ko kati inotiudzei nemusoro wayo?
Unoziva here kuti katsi inotiudzei nemusoro wayo? Kana iwe uchida kunzwisisa yako furry zvirinani, usazeze kupinda kuti uvandudze kutaurirana kwako naye.
Kwakatangira izwi rekuti kati
Wati wamboshamisika here kuti kwakabva kupi izwi rekuti katsi? Pinda uye iwe uchaona kunobva izwi rinoshamisa iri.
Chii chinonzi aururophobia
Uri kutya katsi here? Kana zvirizvo, iwe uri munhu ane ailurophobia. Asi usazvidya moyo, isu tinokuudza kuti ungazvigadzirisa sei.
Katsi ine vangani varidzi
Ichokwadi here kuti katsi haigoni kubatana nemumwe munhu? Pinda uye isu zvakare tichakuudza iwe kuti vangani vane katsi ine.
Matambudziko mukuendeswa kwekati
Isu tinokuudza kuti ndeapi matambudziko anogona kuitika mukuzvarwa kwekati kuitira kuti iwe ugone kuona chero chiratidzo chedambudziko.
Nei Katsi dzeOrange Kazhinji Vanhurume
Wati wamboshamisika here kuti nei katsi dzeorenji kazhinji dziri varume? Uyu mubvunzo unodisisa kwazvo watinokupindura iwe pano. Kupinda.
Sei katsi dzichigunun'una mazino kana dzichiona shiri
Wati wamboshamisika here kuti sei katsi dzinogedzera meno padzinoona shiri? Tsvaga kuti sei vachiratidza maitiro aya.
Nzira yekudzivirira katsi yangu kurwa nedzimwe kati
Unoda here kuziva kudzivirira katsi yangu kurwa nedzimwe kati? Pinda uye isu tinokupa iwe matipi mazhinji ekugadzirisa dambudziko iri.
Katsi inoda nzvimbo yakadii
Wati wamboshamisika kuti ingani nzvimbo kati inoda? Pinda uye isu tinokuudza iwe mhinduro kumubvunzo wako kuitira kuti iwe ugone kutarisira zviri nani yako furry.
Kuchengeta sei katsi yangu zvirinani
Iwe unoda here kuti furry yako igare samambo? Pinda uye isu tichakuudza maitiro ekuchengeta zvirinani katsi yangu, nemazano mazhinji ayo, chokwadi, uchada.
Sei katsi yangu ichindimutsa mangwanani?
Sei katsi yangu ichindimutsa mangwanani? Kana iwe uine uyu mubvunzo mupfungwa dzako, usazeze kupinda kuti uone kuti ungaudzivirira sei.
Maitiro ekutamba nekatsi yeSiamese
Iwe une furry yerudzi urwu uye unoda kufara naye? Tsvaga yekutamba nekatsi yeSiamese nenzira kwayo.
Asina-chepfu katsi anodzosera
Kutsvaga isiri-chepfu katsi dzinodzosera? Usati washandisa mari, tarisa pane ino runyorwa uye edza iwo atinokurudzira. Vanoshanda here?).
Nzira yekuziva sei kuti kati yangu ine matambudziko emoyo
Uri kunetseka nezve furry yako here? Tsvaga kuti ungaziva sei kuti kati yangu ine matambudziko emoyo uye zvekuita kana uchifungidzira kuti anayo.
Nguva yekubvisa stitches kubva kati
Wakave nekuvhiyiwa pane yako furry uye iwe uchida kuziva nguva yekubvisa masitepisi kubva kukati? Kana zvirizvo, pinda uye isu tichakuudzawo maitiro ekuzvichengeta kuitira kuti igadzirise nekukurumidza.
Maitiro ekudzora kupisa kwekati
Isu tinokuudza maitiro ekudzora kupisa kwekati, sarudzo dzakasiyana dzatinogona kusarudza kuitira kuti furry igone kurarama hupenyu hwakadzikama.
Kuchengeta sei katsi iyo yaingova nekiti
Isu tichakuudza maitiro ekuchengeta katsi iyo ichangobva kuve nekiti kuitira kuti zvese zvifambe zvakanaka. Batsira furry yako kuti ive nevana vake.
Zvinokonzera hukasha pakati pekati pamba
Tsvaga kuti ndezvipi zvinokonzeresa kuita hukasha pakati pekati kumba uye zvaunogona kuita kudzimisa uye kudzorera zvese kune zvakajairwa.
Zvakanaka here kutamba nelaser?
Iwe uri mumwe wevaya vanotamba neraser pointer nekatsi yako here? Kuti uchengetedze mutambo unonakidza, tinokuudza mashandisiro aungaita.
Permethrin chepfu mumakati
Isu tinokuudza kuti ndezvipi zviratidzo uye zvinokuvadza zvinounzwa nehutetrin huturu mumakati, uye kuti zvingadzivirirwe sei.
Nzira yekudyisa mboro isingade kudya
Yako furry inosuruvara uye haidi kudya kuruma? Tsvaga nzira yekudyisa kati iyo isingade kudya, uye mubatsire iye kunatsiridza.
Crytoquirdia mumakati: chii icho uye inorapwa sei?
Isu tinokuudza iwe kuti chii chinonzi cryptorchidia uye kuti inorapwa sei, chirwere chebonde chinogona kuva nekatsi. Tsvaga tarisiro ipi yaunoda kuti uwanezve.
Ndezvipi zviratidzo zvekurwadziwa mumakati?
Isu tinokuudza kuti ndezvipi zviratidzo zvekurwadziwa mumakati kuti iwe ugone kuzviziva uye woenda nazvo kuna vet paunongofungidzira kuti pane chakaipa pairi.
Maitiro ekubvisa mapfundo mumakati ane vhudzi refu
Isu tinokuudza mabviro aungaita mapfundo mumakati ane vhudzi-refu kuti shamwari yako iratidze zvakare hunhu hwake hunokosha zvakare. Kupinda.
Rini kuti ubudise katsi yakarasika?
Uri kutarisira feline koloni here? Kana zvirizvo, isu tinokuudza iwe kuti ubudise nguvai katsi yakarasika kuitira kuti ugone kuitora iri nani.
Septicemia mumakati: chii icho uye inorapwa sei?
Septicemia hutachiona hunotyisidzira hupenyu. Kana ikasagamuchira kutarisirwa kwezvipfuyo kwainoda, katsi iri munjodzi huru. Kupinda.
Ko katsi dzinoitei kana dziri dzoga?
Ko katsi dzinoitei kana dziri dzoga? Isu tinopindura uyu unonakidza mubvunzo kuti iwe ugone kudzidza zvakawanda nezve aya anoshamisa furry aya.
Chikafu chakapfuma mu taurine yekitsi
Iyo yakakosha amino acid yekushanda kwemuviri weshamwari yedu. Mupe izvo zvekudya zvakapfuma mu taurine yekatsi uye iye achazvifarira zvirokwazvo.
Ndingave nekitsi ngani kumba?
Kana iwe uri mudiwa feline, iwe pamwe wakambozvibvunza kanopfuura kamwe chete kuti mangani katsi andingave nawo kumba, handiti? Pinda uone. ;)
Katsi ine mazino mangani
Isu tinokuudza iwe kuti katsi ine mazino mangani, zvese muhudiki hwayo hwekutanga uye kana yangosvika kukura. Uye zvakare, isu tinokupa iwe matipi ekuti utarisire iyo.
Katsi Dzinogona Kudya Nyuchi?
Wakambozvibvunza here kuti katsi dzinogona kudya marungwa? Kana iwe uchida kuziva mhinduro, usazeze kupinda.
Katsi yako yakatanga kunwa mvura kakawanda here? Kana zvirizvo, chenjera: iwe unogona kunge uine polydipsia. Tsvaga kuti chii uye kuti chingarapwa sei.
Kuchema kwekitsi kunorevei?
Kuungudza kwekatsi kazhinji chiratidzo chekuti furry haina kunyatsonaka. Tsvaga kuti sei ari kuchema uye zvaunofanira kuita kuti adzokere kuhutano.
Nei katsi yangu yakasuruvara?
Katsi yako yakasuruvara uye hauzive nei? Tsvaga kuti ndezvipi zvikonzero zvingangodaro uye matanho api aunotora kuti uvandudze.
Nei katsi yangu ichinwa kubva papombi
Uri kushamisika kuti nei katsi yangu ichinwa kubva pombi? Kana iwe uchida kuziva chikonzero cheiyi hunhu uye maitiro ekuzvidzivirira, usazeze kupinda.
Nzira yekuwana katsi imba nyowani
Katsi yako yakave nembwanana uye iwe hauzive nzira yekuwana katsi imba nyowani? Usatombo kunetseka: isu tichakubatsira iwe. Kupinda!
Kubatsira sei katsi yakarasika
Isu tinokuudza iwe kuti ungabatsira sei katsi yakarasika kuitira kuti iwe ugowana iye kuti ave nehupenyu hwakawanda hwakagadzikana uye hunofadza. Kupinda.
Zvokuita kana hypothermia iri mumakati
Isu tinokuudza kuti chii uye ndeapi matambudziko anogona kukonzerwa ne hypothermia mumakati. Pinda uye uone zvekuita kuti furry yako irege kutambura nayo.
Katsi Dzinogona Kubata Inda?
Wakambozvibvunza here kuti katsi dzinogona kuwana inda? Isu tinogadzirisa kusahadzika kwako uye tinokuudza iwe, mukuwedzera, kuti ungavabvisa sei kubva kune yako furry imwe.
Zvekuita kana katsi yangu isingakwanise kuita tsvina
Isu tinokuudza zvekuita kana kati yangu isingakwanise kuita tsvina. Tsvaga kuti ndezvipi zvinonyanya kukonzera zvikonzero uye matanho api anofanira kutorwa kuitira kuti furry igadziriswe.
Nzira yekuratidzira rudo kune kati?
Isu tinokuudza maratidziro aungaita katsi, uine akawanda matipi uye manomano kuitira kuti iwe nefuru yako muve shamwari dzakanaka kwazvo. Kupinda.
Nzira yekutarisira katsi yeSavannah?
Uri kufunga nezvekuwana yakasarudzika furry? Pinda tinokuudza maitiro ekuchengeta katsi yeSavannah, imwe yemhando dzakasarudzika.
Unogona here kudzora kati feral?
Wati wakambozvibvunza here kana iwe uchikwanisa kudzora kati feral? Uhu furry rwusati rwambosangana nevanhu, asi sei kumubatsira?
Nzira yekutarisira sei feline koloni?
Iwe unoda kubatsira katsi dzakarasika here? Pinda tinokuudza maitiro ekuchengeta feline koloni kuitira kuti igone kutungamira hupenyu hwakadzikama uye hunofadza.
Mishonga yekumba yekukaka katsi
Semutarisiri wavo, furry rinofanirwa kudzidziswa kuti risakwate, asi vachiri kudzidza, zvinonakidza kuve nemishonga yekumba yekukwaya katsi. Kupinda.
Katsi inokuda sei?
Iwe unoda kuziva here kuti katsi inokuda sei? Kana zvirizvo, iwe wasvika kurudyi nzvimbo. Wana kuwana kuvimba kwavo pasina nguva.
Ungaziva sei kuti kati yangu yakamboshungurudzwa?
Kana iwe uchifungidzira kuti shamwari yako yanga isina hupenyu hwakareruka, pinda tinokuudza maitiro ekuziva kana kati yangu yashungurudzwa uye zvaunogona kuita kuti umubatsire.
Ndoti kudii nekatsi yangu
Kutaura mushe kune feline ndicho chinhu chakaomesesa chatingaite. Saka pinda uye isu tichakubatsira iwe kuziva matauriro ekati yangu.
Sei katsi dzekare dzichitetepa?
Wakambozvibvunza here kuti nei katsi dzekare dzinoonda? Pano une mhinduro. Tsvaga kuti sei katsi dzakura dzichideredza uremu.
Sei kupuruzira kati yangu?
Uri kushamisika kuti ungakanganisa sei kati yangu? Kana iwe uchida kuti afare kupfuura zvaari chaizvo, pinda uye tinokuudza maitiro ekumupuruzira.
Nzira yekudyisa sei katsi?
Kuchengeta imbwa ine mvere kunotora nguva uye yakawanda moyo murefu. Kana iwe wawana imwe, tinotsanangura nzira yekudyisa katsi kuti ikure ine hutano.
Zvakaipa here kusarega kati yangu ichibuda?
Zvakaipa here kusarega kati yangu ichibuda? Saka kuti iwe ugone kusarudza zviri nani zvekuita, isu tinokuudza iwe zvakanakira uye njodzi dzinogona kuwanikwa mumugwagwa.
Sei katsi dzisingafanirwe kuve dzinhu?
Aya ane furry anodikanwa kwazvo, asi zvakakosha kuti ubate zvakanaka. Pinda uye isu tichakuudza kuti sei katsi dzisingafanirwe kuve dzevanhu.
Nguva yekupa rudo kune kati?
Iwe uchangobva kutora furry imwe uye urikushamisika kuti unombundira riini katsi? Pinda uye isu tinotsanangudza kwauri inguva dzakanakisa dzekukupuruzira.
Ungamisa sei hasha katsi?
Iko furry yako yatanga kuita zvechisimba here? Tsvaga kuti ungamisa sei katsi ine hukasha uye nei ichigona kuratidzwa nenzira iyoyo.
Matipi ekati yako kubhadhara zvakanyanya kune iwe
Iwe unoda kuvandudza hukama neako furry? Kana zvirizvo, pinda uye isu tinopa akateedzana matipi ekati yako kuti inyanyoteerera iwe.
Hunhu hwekatsi nhema hwaita sei?
Uri kufunga kutanga kugara nefeline here? Tsvaga kuti sei hunhu hwekati dema, mhuka yakasarudzika yauchada. ;)
Zvekuita kana katsi yangu yarasika
Uri kushamisika zvekuita kana katsi yangu yarasika? Kana zvirizvo, pinda uye uteedzere kuraira kwedu kuti ugone kuidzosa nekukurumidza.
Inguva yakareba sei iwe yaunofanirwa kutamba nekitsi?
Uri kushamisika kuti yakareba sei kutamba nekatsi? Kana iwe uchida kusimbisa hukama neshamwari yako, usazeze kupinda.
Katsi Dzinofanotaura Rufu Here?
Wakambozvibvunza here kuti katsi dzinogona kufanotaura rufu? Pinda kuti uzive mhinduro kumubvunzo uyu wekuda kuziva.
Sei katsi dzichidhonza vhudzi radzo kunze
Isu tinokuudza iwe kuti sei katsi dzinodhonza bvudzi ravo uye matanho api aunofanira kutora kuti vadzosere nekukurumidza. Kupinda.
Kudzidzisa sei kati kudzika masitepisi
Kana iwe uchangowana iyo ine furry imwe uye uchida kuziva kuti ungadzidzise sei katsi kuenda pasi pamatanho, tevera rairo yedu uye iwe uchaona kuti inokurumidza sei kuidzidza. ;)
Ndeupi hunhu hweyakajairika katsi yekuEurope
Kufunga kwekutora? Kana zvirizvo, pinda mukati tigokuudza kuti hunhu hweyakajairika katsi yekuEurope hwakamira sei kuti ugone kuita sarudzo yakanaka
Kusiya mboro wega
Isu tinotsanangura kuti ungasiya sei katsi wega kuitira kuti ugone kuenda usina kunetseka nezve chero chinhu. Tora furry yako kuti ugare uchivaraidzwa iwe usipo.
Nzira yekubvisa nhata nezvikwekwe kubva kumba
Iwe unoda kuziva nzira yekubvisa nhata nezvikwekwe mumba? Tsvaga maitiro ekuzviita kuti varege kuoneka zvakare mumba mako.
Nei katsi dzichida kuvanda?
Wakambozvibvunza here kuti nei katsi dzichida kuvanda? Kana zvirizvo, ino ndiyo nguva yekuziva. Kupinda. ;)
Nei katsi yangu ichirutsa ndapedza kudya
Uri kushamisika kuti nei kati yangu ichirutsa ndapedza kudya? Tsvaga kuti chii chiri kukonzeresa uye zvaungaite kudzivirira kuti zvisaitike zvakare.
Chii uye sei kudzivirira parachuti cat syndrome?
Chii chinonzi parachute cat syndrome? Pinda uye zvakare uwane zvaunogona kuita kudzivirira yako feline kubva mukutambura chero kushungurudzika.
Sei katsi dzichifemesa miswe yavo
Isu tinokuudza kuti sei katsi dzichifutisa miswe uye uye meseji yavanoda kuburitsa nguva dzese dzavanoita. Pinda kuti unzwisise zvakanyanya uye zvirinani furry yako.
Isu tinotsanangura nzira yekufarira katsi, ine matipi uye manomano ayo anozobatsira zvakanyanya kuti uve shamwari yake yepamoyo.
Chii chinofanira kuve chikafu chekudya sekati ine chirwere cheshuga?
Huru yako yakaonekwa here kuti ine chirwere ichi? Mubatsire kuti awanezve hutano hwake. Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti chikafu chinofanirwa kuve chei katsi ine chirwere cheshuga.
Hutano kubatsirwa kwekatsi
Kana iwe usina chokwadi kana uchifanira kugara neine furry imwe, pinda uye uone kuti ndezvipi zvakanaka zvekatsi. Chokwadi vanokushamisa.
Maitiro ekuisa madonhwe eziso mukitsi
Iko furry yako yakatemerwa kudonha kweziso? Kana iwe usingazive kuisa madonhwe mumaziso ekati, pinda mukati uye isu tinokuudza iwe kuzviita sei.
Nzira yekuita sei katsi kumba
Uri kufunga nezve kutora kana kutora imwe furry imwe? Kana zvirizvo, tsvaga kuti ungaita sei katsi kumba uye ndeapi mabhenefiti ekugovana hupenyu hwako nemumwe.
Ungaziva sei kana meno ekatsi yangu achikuvadza
Iyo furry yako inoruma kupfuura zvakajairwa? Watanga here kurasikirwa nehavi uye / kana huremu? Pinda uye isu tichakuudza maitiro ekuziva kana mazino ekitsi yangu achirwadza uye kuti unomubatsira sei.
Nzira yekudzivirira sei weti yangu yekatsi kunhuwa
Nzira yekudzivirira sei weti yangu yekatsi kunhuwa? Nemaitiro mashoma akareruka ayo anovandudza hutano hwako uye hupenyu hwako. Pinda uye uzviwane.
Maitiro ekumisa kati yangu kubva pakumaka ndima
Iyo furry imbwa inowanzo kukamba nekumaka, asi ndingaite sei kuti ndimise kati yangu kubva pakumaka nharaunda isina kukodzera? Pinda uye tichakutsanangurira.
Kuchengeta sei katsi ine scabies
Huru yako yakaonekwa here kuti ine chirwere ichi? Kana zvirizvo, dzikama. Pinda uye isu tinokuudza maitiro ekuchengeta katsi ine mange kuitira kuti ive nani munguva pfupi.
Nzira yekubatsira sei katsi kurara husiku?
Iwe unogara neakawanda ane furry? Tsvaga nzira yekubatsira katsi kurara husiku kuti mhuri yese izorore.
Sei katsi yangu yakafuta zvakanyanya?
Uri kunetseka nezve furry yako here? Kana iwe uchishamisika kuti sei katsi yangu yawana huremu hwakawanda, usazeze kupinda kuti uwane zvekuita kuti ihure.
Ndezvipi zviratidzo zvegomarara mumakati
Dzidza nezve zviratidzo zvekenza mumakati, chimwe chezvikonzero zvikuru cherufu mune idzi mhuka dzinoshamisa.
Nzira yekudiridza sei katsi?
Nzira yekudiridza sei katsi kudzivirira matambudziko mapfupi uye akareba? Kana imbwa dzako dzine mvere dzisinganwe zvakakwana, pinda tinokuudza zvekuita kuvabatsira.
Sei katsi dzichirara pauri?
Wakambozvibvunza here kuti nei katsi dzichirara pamusoro pako? Tsvaga zvikonzero zvinoshamisa nei vachizviita. ;)
Nzira yekurapa cystitis mumakati
Ko furry yako inobuda mutray here? Kana zvirizvo, pinda kuti udzidze maitiro ekurapa cystitis mumakati, chimwe chezvirwere zvinotyisa zvekuvhenekera.
Maitiro ekuwana katsi kuvimba
Iwe uchangobva kutora feline here? Ziva kuti ungawana sei kuvimba kwekatsi nekushivirira, kuremekedza uye rudo kuitira kuti imi mose mufare.
Maitiro ekubvisa angu katsi hiccups
Kunyangwe isiri kazhinji dambudziko rakakomba, dzimwe nguva zvakafanira kuti ubatsire iwe. Pinda kuti uone kuti ungabvisa sei hiccups dzekati yangu.
Nzira yekudzivirira sei kupisa sitiroko mumakati?
Munguva yezhizha zvakakosha kuti uzive maitiro ekudzivirira kupisa sitiroko mumakati. Nekutora matanho mashoma, tinogona kudzivirira edu ane furry.
Zvese nezvechirwere cheLyme mumakati
Chirwere cheLyme ndechimwe chezvinonyanya kutyisa izvo furry yedu inogona kuve nayo. Dzidza kuiziva uye uzive maitiro ekudzivirira.
Maitiro ekuita kuti hupenyu hurerukire katsi?
Kana iwe ukagara nefine uye uine hanya nekufara kwayo, isu tinokuudza maitiro ekuita kuti hupenyu hurerukire katsi kuti igone kunzwa zvirinani padivi pako
Ndinogona here kugeza kati yangu neyakajairwa sipo?
Huru yako inoda kugezwa here? Kana iwe uri kushamisika kana ndichigona kugeza katsi yangu neyakajairwa sipo, pinda kuti uzive mhinduro.
Nei mboro yangu ichiruma muswe wayo
Uri kunetseka nezve furry yako here? Kana iwe uchinetseka kuti nei katsi yangu iri kuruma muswe wayo, usazeze kupinda uye uwane, zvakare, zvekuita kuti ubatsire.
Maitiro ekuchenesa katsi yangu marara bhokisi
Kana tichida kuti shamwari yedu inzwe kugadzikana tinofanirwa kuchenesa imba yake yekugezera yega. Pinda uye uone kuti ungachenesa sei marara angu ekati.
Nei katsi yangu ine nhumbu ichibuda ropa
Musikana wako ane mvere atanga kubuda ropa here? Kana iwe uri kutarisira kittens, pinda mukati uye isu tichakuudza iwe kuti nei mwana wangu ane nhumbu ari kubuda ropa uye maitiro aunofanirwa kuita kuitira kuti ive nani.
Maitiro ekurapa kushushikana mumakati
Shamwari yako isiri kunakidzwa here? Kana achinetseka, usazeza kupinda. Isu tinotsanangura zvakadzama maitiro ekurapa kushushikana mumakati.
Matipi ekudzidzisa katsi yako
Tinokupa iwe akateedzana matipi ekudzidzisa katsi yako. Dzidza maitiro ekumuita iye anofara furry parutivi rwako. Kupinda.
Nei katsi yangu ichindiruma?
Uri kushamisika kuti nei kati yangu ichindiruma? Kana iwe zvakare uchida kuziva zvekuita kuti urege kuruma, usazeze kupinda.
Maitiro ekudzivirira katsi yakatsauka
Iwe uri kufunga nezve kutora mune feline inogara mumugwagwa? Kana zvirizvo, tsvaga maitiro ekudzora katsi yakarasika uye uite kuti ifare.
Nzira yekutarisira katsi yeMaine Coon
Iwe wakangotora imwe yeaya akakosha furries? Pinda kuti uzive maitiro ekuchengeta katsi yeMaine Coon, imwe yeanonyanya kudiwa.
Zvekuita kana katsi yangu yakwira mumuti
Kana iwe uine imbwa ine mvere yawakawana pamusoro pegodo, pinda tinokuudza zvekuita kana katsi yangu yakwira mumuti.
Maitiro ekuzorodza kati
Une shamwari ine rambunctious kana isina zororo shamwari? Kana iwe usingazive maitiro ekuzorodza kati, usazeze kupinda. Tinokupa matipi mazhinji ekumusimbisa. ;)
Ndebvu dzekatsi dzinokura zvakare?
Ungada here kuziva kana ndebvu dzekatsi dzichikura zvakare? Isu tinogadzirisa kusahadzika uye, mukuwedzera, isu tinotsanangura kuti nei zvisina kunaka kudzicheka.
Ndezvipi zviratidzo zveglaucoma mumakati?
Zvinokonzerwa nekuunganidzwa kwemvura mukati meziso, chirwere chinogona kuve chakakomba, asi ndezvipi zviratidzo zveglaucoma mumakati? Kupinda.
Sei maziso angu ekati achichema
Ane maziso ekatsi akatanga kuburitsa akawanda eziso rakavanzika kupfuura zvakajairwa? Kana zvirizvo, pinda tinokuudza kuti sei maziso ekitsi yangu achidiridza.
Ungaziva sei kuti kati yangu ine huro inorwadza
Icho chimwe chezviratidzo zvinoenda zvisingaonekwe zvakanyanya. Isu tinotsanangura nzira yekuziva kana katsi yangu ine huro inorwadza uye zvaunogona kuita kumubatsira.
Kubatsira kwekutora kati yangu
Feline sterilization kuvhiya kunoderedza kuwanda kwekitsi. Dzidza nezve mabhenefiti ekuchenesa kati yangu.
Nei katsi yangu ichirwisa vashanyi
Kana furry yako ikauya kuzokushanyira, anotya here uye haana kugadzikana? Tsvaga kuti sei katsi yangu ichirwisa vashanyi uye zvekuita kudzivirira kuti irege kudaro.
Katsi Dzinogona Kudya Tuna?
Iwe uri mumwe weavo vanopa tuna kumakati? Kana zvirizvo, usati waenderera mberi nekuita kudaro, tinokukoka kuti upinde kuti uone kana katsi dzinogona kudya tuna kana kwete uye nei.
Maitiro ekupenya bvudzi rekitsi yangu
Bvudzi reshamwari yako rarasa kupenya kwaro? Kana iwe uchishamisika kupora bvudzi rekitsi yangu, edza matipi edu uye manomano
Ko furry yako yatanga kudya zvinhu zvaasingafanire? Kana uri kushamisika kuti sei katsi yangu ichidya jecha, pinda upindure mubvunzo wako.
Iwe unofunga kukura mhuri here? Kana zvakadaro, tinotsanangura zvatinofanira kuziva tisati tagamuchira katsi kuti zvive nyore kwavari kuti vachinje.
Isu tinogona pakupedzisira kuziva uko kudzidziswa kwekati kwakatangira. Hukama hwehukama hwevanhu hwakatanga makore zviuru gumi zvakapfuura mumajecha erenje. Kupinda.
Katsi ingavanda kupi?
Hausi kuwana yako furry? Kana wave nenguva uchitsvaga asi usingaiwane, tinokuudza panogona kuvanda kati.
Zvaunofanira kuita kana katsi ikakuomera
Kana iwe uine feline inoita kunge inovhunduka uye iwe usisazive zvekuita kana katsi ikakwenya pauri, pinda tinokuudza kuti ungadzikamisa sei.
Nzira yekutuka mbwanana katsi
Kugara neiyo diki feline hairball inovimbisa iwe yakawanda nguva yemufaro, asi zvakare mamwe emitsipa. Tsvaga maitiro ekutsiura mbwanana katsi.
Ndezvipi zvinonhuwira zvinoita katsi?
Iwe unoda here kupa yako furry chipo chakakosha kwazvo? Tsvaga kuti chii chinonhuwira katsi senge uye tora chirimwa. Tichafara.
Ndeipi hunhu hwekati iri kupisa?
Kana iwe uine furry imwe uye iwe uchifanirwa kuziva kuti hunhu hwekatsi pakupisa hwakaita sei, usazeze kupinda kuti uone kuti ndedzipi shanduko dzinoitika mairi.
Nei muromo wekati wakashama
Kangani iwe wakamboshamisika kuti nei muromo wekati wakashama? Vazhinji, handiti? Inguva yekuziva mhinduro. Kupinda!
Nguva yekutsvaira kati
Feline kuwandisa kwevanhu idambudziko rakakomba kutenderera pasirese. Kuti tidzivise marara asingadiwe, tinotsanangura nguva yekuchenesa kati.
Maitiro ekuchengetedza katsi yangu kutonhorera
Isu tinokuudza maitiro ekuchengeta katsi yangu inotonhorera kuitira kuti iwe pamwe nehunhu hwako mugone kushandisa risingakanganwike zhizha musina kunetseka nezve chero chinhu.
Nei katsi yangu ichidhonza bvudzi rake
Iko furry yako yatanga kurasikirwa nevhudzi rakawanda? Kana zvirizvo, iwe unofanirwa kuve nehanya. Tsvaga kuti sei katsi yangu inodhonza vhudzi rayo uye zvekuita kuti ubatsire.
Nzira yekuseka kati
Iwe unoshandisa yakawanda nguva kure nemusha uye iwe unofanirwa kuziva nzira yekuvaraidza kati? Usanetseke. Dzvanya uye iwe uchaona kuti furry yako ichave nenguva yakanaka sei.
Zviratidzo uye kurapwa kwehutachiona hwehutachiona dermatitis mumakati
Tsvaga kuti ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kweflea allergy dermatitis mumakati uye kuti vawane kufema nyore.
Kurapa kwezvirwere zvemukati mumakati
Iwe unofungidzira kuti avo vane furry vane hutachiona hwehutachiona? Kana zvirizvo, pinda uye tinokuudza kuti kurapwa kwematumbu matumbu mumakati sei.
Zvinotarisirwa nevaridzi vedzimba
Ndezvipi zvisungo zvevaridzi vemakati maererano nemutemo kuSpain? Kuti uwane kuti ndeapi mabasa edu sevatariri, pinda.
Katsi dzakauchikwa mhuka dzakagadzirwa kuitira kuti vanhu vagone kurarama nechinhu chinoshamisa chechisikwa. Svika pakuvaziva zvakadzama.
Zvinhu zvisingagoni kuitirwa katsi
Iwe unoziva here kuti ndezvipi zvinhu zvisingakwanise kuitwa kukati? Kuti usimbise hukama hwako, pinda uye iwe uzive zvinovengwa nemhuka inoyevedza iyi.
Sei katsi yangu isingazvinunure
Isu tinokuudza kuti nei kati yangu isingazvinunure pachedu, uye nezvaungaite kuti idzokere kuhupenyu hwakajairwa nekukurumidza.
Huru yako haina kunzwa zvakanyanya here? Kana zvirizvo, pinda tinokuudza zvekuita kana katsi yangu ichirwadziwa nemudumbu kuti ikwanise kupora nekukasira.
Kana iwe uri kufunga nezvekukura mhuri nembwa ine hura uye iwe uine kusahadzika nezvekuti unotora kati riini, usazeze kupinda.
Yako furry yarasika uye iwe unofanirwa kuziva nzira yekubatsira kati kudzoka kumba? Usatombo kunetseka: isu tinokubatsira iwe. Pinda kuti ndikurumidze kudzoka.
Zvirwere zvinoparadzirwa nekatsi dzakarasika
Kana iwe uchida kutora kumba furry kubva mumugwagwa, pinda mukati uye uone izvo zvirwere zvinorasika katsi zvinopfuudza kudzivirira matambudziko.
Maitiro ekubvisa zvikwekwe kubva kukati
Isu tinokuudza mabviro emakitsi kubva kukati, kudzivirira musoro wechirwere kubva mukati memhuka, kudzivirira hutachiona.
Sei Katsi Dzisingaridze Ruzha Kana Vachifamba
Wati wamboshamisika here kuti nei katsi dzisingaridze ruzha kana dzichifamba? Ziva icho chiri chakavanzika chakachengetedzwa kwazvo chemhuka idzi.
Mboro yangu yakadzimwa, ndomubatsira sei?
Shamwari yako haararame hupenyu hwakajairika here? Kana katsi yangu yabva, zvakakosha kuti uone kuti chii chakonzera kusagadzikana kwake kuti kumubatsire. Kupinda.
Sei kujairira katsi kudya ini ndinofunga?
Pinda uye uteedzere kuraira kwedu kuti uzive maitiro ekujairira katsi kudya ini ndinofunga. Iwe uchaona kuti nekushivirira uchazviwana sei. :)
Zvese nezve feline herpesvirus
Isu tinokuudza zvese nezve feline herpesvirus, chimwe chezvirwere zvinonyanya kukosha chinogona kukanganisa edu anodikanwa katsi
Ndeapi matambudziko anogona kuitika kubva kuruma kati?
Iyo feline yatinayo imhuka iyo, kana ikasarapwa neruremekedzo nerudo, inogona kurwisa. Ngatione kuti ndeapi matambudziko ekurumwa nekatsi.
Kuranga sei katsi ine hukasha
Isu tinokuudza maitiro ekuranga katsi ine hukasha nenzira yakanakisa. Ita kuti shamwari yako igadzikane nekumudzidzisa neruremekedzo uye rudo.
Kusarudzwa kwemazita emakitsi echirume
Haisi chokwadi chekudaidza furry yako? Tinokubatsira. Pinda utarise kusarudzwa kwedu kwemazita ekitsi dzechirume.
Matipi ekutora katsi yakarasika
Isu tinokupa iwe akateedzana emazano ekuti utore katsi yakarasika. Kana iwe uri kufunga nezve kugashira iye furry mudiwa, ivo vanozobatsira kwazvo. ;)
Nzira yekupa kati piritsi
Isu tinotsanangura kuti iwe unogona sei kupa kati piritsi pasina kukonzera kusagadzikana kukuru. Ita kuti aimedze kuti awedzere hutano hwake.
Zvakanakira nekuipira kuve nekatsi
Kufunga kwekutora diki feline? Kana zvirizvo, tiri kuzokubatsira nekukuudza zvakanakira nekuipira kuva nekitsi.
Nzira yekufamba sei nekatsi nemotokari?
Kufamba nekatsi nemotokari kunogona kunge kuri odyssey. Kuita kuti zvive nyore uye zvinakidze, tinokupa iwe akateedzana matipi anozoita kuti ugare wakadzikama.
Kuchengeta katsi yevakuru
Ingo gamuchirwa munhu ane furry? Kana zvirizvo, izvi zvinokufadza. Pinda uye iwe uchazoziva maitiro ekuchengeta katsi yevakuru kuti inzwe kufara newe.
Zvinokonzera kushushikana mumakati
Ndezvipi zvikonzero zvekuora mwoyo mumakati? Kana iwe uchigovana hupenyu hwako nemhuka idzi, tsvaga zvekuita kuvabatsira kuti vanzwe zvirinani.
Nei zvakakosha kutora katsi kuna vet
Kana uchangobva kuwana furry, pinda uye isu tinokuudza iwe kuti sei zvakakosha kuti uendese kati kuna vet kuti ive noutano hwakanaka.
Matipi ekuvandudza kugarisana pakati pembwa nekatsi
Tinokupa iwe akateedzana matipi ekuvandudza kugarisana pakati pembwa nekatsi. Vatevere ivo kuitira kuti vese vane hura vave nehukama hwakanaka. ;)
Kudya kwehukama mumakati
Isu tinokuudza zvese nezve chikafu chekudya mukitsi: zviratidzo, chii chinokonzeresa kurwara, maitiro ekuzvidzivirira, uye zvimwe zvakawanda.
Ungawana sei katsi mbiri dzechirume kuti ugarisane?
Uri kuronga kuunza yechipiri furry? Tsvaga maitiro ekuti uwane vaviri katsi dzechirume kuti ugarisane neaya matipi atinokupa iwe.
Katsi inotariswa zvakanaka here?
Ko furry yako inoenda kunze uye ungade here kuziva kana katsi dzakatariswa zvakanaka? Pinda uye isu tichakupa mhinduro kumubvunzo uyu wekuda kuziva.
Nzira yekutarisira mhuka?
Isu tinokuudza maitiro ekuchengeta mhuka kuitira kuti ugone kugara nadzo nenzira yakanakisa, uchinakidzwa nerudo rwavanokupa.
Nguva yekupfuya kati
Isu tinokupa makiyi kuitira kuti ugare neshamwari yako ine furry inonakidza kwazvo nekutsanangura nguva yekuvaraidza katsi.
Yakawanda sei mvura inofanira kunwa kati
Isu tinokuudza kuti ingani mvura inofanirwa kunwa kati kuti igare yakasimba uye iine hydrated. Wongorora huwandu hwaunonwa kuti ukwanise kuona shanduko dzinogona kuitika.
Nei Katsi Dzakaita Senzvimbo Diki
Tsvaga mhinduro yekuti nei katsi dzakaita senzvimbo diki, uye zvaunogona kuita kuti vanzwe vakachengeteka kumba.
Nzira yekufambisa sei feline koloni?
Kufambisa feline koloni hazvisi nyore nguva dzose, sezvo katsi dziri munzvimbo dzakanyanya. Asi nemazano aya, zvichave nyore kwauri.
Sei mhuka dzasiiwa
Isu tinokuudza iwe zvikonzero nei mhuka dzichisiiwa, dzese imbwa nekatsi, uye chii chingaitwe kugadzirisa dambudziko.
Kudzidzisa sei katsi kuti isapinda pasofa
Iyo furry inogona kutora kumborara munzvimbo dzatisingade, asi izvo zvine mhinduro. Pinda tinokuudza kudzidzisa kati kuti isakwira pasofa.
How kudzidzisa kati kuzvisunungura pachezvayo
Iwe unofanirwa kuziva here kudzidzisa kati kuzvinunura pachayo? Ngatipe iwe kiyi kuitira kuti iwe ugomuwana iye kuti adzidze nekukurumidza.
Ndedzipi hwema hunovengwa nekatsi
Iwe unoda here yakasikwa katsi inodzinga? Tsvaga kuti chii chinonhuhwa katsi dzinovenga kuti iwe ugone kuvatadzisa kuenda kunzvimbo yemusha.
Sei katsi dzichizora zvinhu
Kuda kuziva kuti sei katsi dzichizora zvinhu? Pinda uye iwe uchaonawo kana imba yako iri yako kana katsi dzako.
Kumisa katsi yangu kubva meowing husiku
Ungade here kuziva nzira yekumisa katsi yangu kubva meowing husiku? Pinda uteedzere kuraira kwedu kuti uite kuti ude kuzorora.
Maitiro ekuchengeta kiti yangu yakachena
Iyo furry haiwanzo seinofarira hutsanana hwega sekitsi yevakuru, asi iyo ine mhinduro. Pinda uone kuti ungachengeta sei kitsi yangu yakachena.
Kuchengeta sei katsi inorwara
Tinokupa iwe matipi akateedzana ayo anozobatsira zvikuru kuziva kuchengetedza katsi inorwara kuitira kuti ipore nekukurumidza sezvazvinogona.
Nguva yekutanga kudzidzisa katsi
Ino inguva yekutanga iwe kugara nemukomana uye iwe unofanirwa kuziva kuti wotanga riini kudzidzisa kati? Pinda kuti uwane kana uchikwanisa kuzviita.
Zvekuita nekatsi ine hukasha
Tinotsanangudza zvekuita nekatsi ine hukasha, tichikupa matipi akateedzana kuti kugara nekatsi ine furry kunofadza mhuri yese.
Ungadzidzisa sei katsi yangu kushandisa iko kukwenya
Isu tinotsanangura maitiro ekudzidzisa katsi yangu kushandisa iko kukwenya, nemazano uye manomano kuitira kuti nekukurumidza kupfuura iwe zvaunofunga kuti iri kurodza nzara dzayo pairi.
Katsi Dzinogona Kuva Nekuparadzaniswa Kunetseka?
Katsi yako ine hunhu hwakaipa kana iwe usipo? Kana zvirizvo, iwe unogona kunge uri kutambura nekuparadzaniswa kunetseka. Mubatsirei nemazano aya.
Makati mangani aripo munyika
Iwe unofarira kuziva kuti mangani katsi ari munyika? Iwe pamwe wakanzwa kuti kune akawanda asi kana iwe uchida kuziva iyo chaiyo nhamba ... pinda.
Zvekuita kana katsi yadzoka
Isu tinokuudza zvekuita kana katsi ikadzoka mushure mekunge waenda kwenguva yakati. Tevedza kuraira kwedu kuti iwe upore nekukurumidza kubva kwawabva.
Isu tinokuudza maitiro ekuona kushushikana mumakati uye zvaunofanirwa kuita kuvabatsira kuti vadzorezve mufaro wavo. Usapotsa.